RW Kuxigeenka oo Shir Gudoomiyey Kulankii Gudiga Ammaanka Badaha Soomaaliya – Radio Daljir
RW Kuxigeenka oo Shir Gudoomiyey Kulankii Gudiga Ammaanka Badaha Soomaaliya
Luulyo 25, 2017 12:50 g 0
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) ayaa shir guddoomiyey kulanka guddiga amniga Badaha, kaas oo looga hadlayay arrimo dhowr ah oo la xiriira badaheena. Guddigan oo loo sameeyey in xiriir joogto ah la yeeshaan hay’adaha kala duwan ee dawladda kuwaas oo ka shaqeeya arrimaha badda ayaa bishii hal-mar kulan ku yeesha Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha.
Waxana kulanka ka soo qeyb galay lix Wasaaradood oo ay khuseyso arrimaha badaha, sida, Wasaaradda Kaluumeysiga, Amniga, Gaashaandhigga, Arrimaha Dibedda, Maaliyadda, Caddaaladda iyo Xeer ilaaliyaha Qaranka iyo wafdi ka socday Maamul Goboleedyada oo si dhow ula socda xaaladda badaha Soomaaliyeed.
Wasiirka Kuluumaysiga iyo Khayraadka Badda Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi, ayaa sheegay in la samaynayo sharcigii lagu dhisi lahaa ciidanka ilaaliya xeebaha oo loo yaqaan (Goast Guard) iyo sidii wax looga qaban lahaa sharci darada looga kaluumeysto xeebaha Soomaaliya, sidoo kale wuxuu tilmaamay in shirkan looga hadlay xoojinta hay’addaha Garsoorka.
Dhanka kale Wasiirka ayaa sheegay in kulankan uu hor-u-dhac u yahay shir kale oo ka dhici doona dalka Uganda, oo looga hadlayo amniga baddaha Soomaaliya, kasoo ay ka qayb galayaan dhammaan maamul Goboleedyada iyo madax ka socota dawladda dhaxe. Sidoo kalena waxaa lagu marti qaaday beesha caalamka sidii ay hay’addaha dhaqaalaha bixiya u taageeri lahaayeen qaabka loo sugayo amniga dalka iyo kan badaha Soomaaliya.
Sarkaal Katirsan Alshabaab iyo Ilaaladiisii oo Nolol lagu Qabtay (Gaalkacyo)
Tayada Tacliimeed ee Jaamacadda Badda Cas (dhegayso)